Gudiga doorashada Koofur Galbeed oo shaaciyay shuruudaha laga doonayo Musharaxiinta – Radio Daljir
Noofember 2, 2018 10:41 b 0
Guddiga doorashooyinka maamulka Koofur Galbeed ee Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray maanta ku sheegay ilaa 9 qodob oo ah shuruudaha laga doonayo qofka noqonaya murashaxa Mdaxweyne ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya .
Hadaba Shuruudaha ayaa ah sidan hoose ku xusan.
1- Inuu yahay muwaadin Soomaali ah, una dhashay deegaannada Koofur Galbeed, oo aan qabiun xaas ajnabi ah.
Wuxuu kaloo guddigu soo saaray jadwalka loo marayo doorashada, sida diiwaangelinta murashaxiinta, shirarka guddiga doorashooyinka, iyo hadal jeedinta murashaxiinta.
Doorashada waxaa ka qayb galaya dhowr iyo toban murashax oo ay ku jirto hal gabar – Aamino Maxamed Mursal – waxaana murashaxiinta ka mid ah madaxweynaha maamulka haya, Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Qodobbada uu soo saaray guddiga ayaan la ogayn sida ay u saamayn doonaan murashaxiinta qaarkood, iyo in ay u hogaansami doonaan.
Shalay ayey ahayd markii warbaahinta maxalliga qaarkood ay sheegeen in loo ogolaaday Mukhtaar Roobow oo hore u ahaa mas’uulka labaad ee ugu sarreeya Al Shabaab uu u tartami karo madaxtinimada Koofur Galbeed.
Dadka wax indha indheeya waxay sheegayaan in doorashadan ay muhiim u tahay maamul goboleedyada dawladda ku kacsan iyo xukuumadda federaalka, kuwaasoo si aan toos ahayn isugu bowdyo-qaawinaya, kuna dhex loollamaya doorashadan.